सार्वजनिक सवारी चलाउने बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना!! – Dainik Sangalo
सार्वजनिक सवारी चलाउने बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना!!
September 10, 2020 2616
आगामी असोज १ गतेदेखि यातायात व्यवसायीहरुले सबै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा सार्वजनिक यातायात संचालनलाई निषेध गरेका बेला व्यवसायीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
बुधबार यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्था विभाग र तीन वटा मजदुर संगठनको संयूक्त बैठकमा व्यवसायी र मजदुर संगठनले यातायात खुलाउन सहजीकरण नगरे विश्वकर्मा पुजाको दिन पारेर असोज १ देखि लामो तथा छोटो दुरीका यातायात चलाउने घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका भिमज्वाला राईले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी संचालनका लागि विकल्प दिन भनिएको बताए।
सरकारले यातायात संचालनका लागि सहजीकरण नगरे आफूहरुले यातायात चलाउने जानकारी विभागलाई गराइएको उनले बताए। ‘यतिञ्जेल हामीले जसोतसो धान्यौं, अब सकिँदैन’ उनले भने।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यो निर्णय आफूहरुले गरेर नभई मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्ने बताए। कोरोना संक्रमण कम भएका ठाउँमा यातायात चलाउन सकिने सुझाव आफूहरुले दिएको उनले बताए।
यद्यपी यातायात सञ्चालन गर्दा सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अवलम्वन गर्ने यातायात व्यसायीले बताएका छन्। ‘कोरोनाविरुद्ध सम्पूर्ण सुरक्षाका उपाय अपनाएर हामीले सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्नेछौं’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले भने।
आफूहरुले सुरक्षाका लागि अपनाउने मापदण्डको प्रोटोकल समेत तयार गरेर विभागमा बुझाएको उनले बताए।
गत चैत ११ गते लकडाउन गरिएपछि लामो दूरीका सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन्। साढे ५ महिनासम्म लामो दूरीका सवारीसाधन चल्न नसक्दा आफूहरु डिप्रेसनको स्थितिमा पुगेको व्यवसायी बताउँछन्।
यसबीचमा मापदण्ड तोकेर केही दिन छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका थिए।
Prevमन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित्, कुलमानको नियुक्ती भोलिमात्रै !
Nextचितवनका थप एक कोराना संक्रमितको मृत्यु
दु:खद खबर : कोरोनाको कारण २४ बर्षिया सिर्जनाको अ’ल्पायु मै निधन !
फागुन ०४ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
भर्खरै आयो निकै दु:खद खबर: एउटै परिवारका तीन बालबालिकाको ज्या’न गयो, पुरै जिल्ला शो’कमा !